🥇 uphendlo-mali kunye nokunika ingxelo ngeziko letyala
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 499
Ividiyo ye-accounting kunye nokunika ingxelo ngeziko letyala
Uku-odola ingxelo kunye nokwenza ingxelo ngeziko letyala
I-Akhawuntingi kunye nokwenza ingxelo ngeziko letyala kwi-USU Software kulungelelaniswe kwimo yangoku yexesha, ke nayiphi na into eyenziwa liziko letyala liboniswa kwangoko kubalo lwayo kwaye kwangaxeshanye kubhalwe ingxelo, ngelixa abasebenzi bengathathi nxaxheba. nayiphi na le nkqubo, kodwa kuphela ekusebenzeni komsebenzi ngokwawo kunye nokubhaliswa kwawo kwiifom ze-elektroniki. Emva koko, zonke iintshukumo, kubandakanya ukubalwa kwemali kunye nokwenza ingxelo, zenziwa zenzekelayo: ukuqokelela ulwazi lomsebenzisi oluqinisekisa ukuthengiselana okwenziweyo, ukuluhlela ngeenkqubo, izinto, izifundo, kunye nokubala izikhombisi eziphantsi kobalo-mali kwaye zibandakanyiwe kwingxelo ezenzekelayo, kwaye Iziphumo ezifunyenweyo ziboniswa kwangoko kuxwebhu oluhamba kunye nenkqubo yobalo.
Ukuzenzekelayo kokunikwa kwengxelo kunye nokunikwa kwengxelo kweziko letyala kuphucula iinkqubo zangaphakathi ezenziwa liziko letyala kwimisebenzi yalo, lilawula imisebenzi nomsebenzi wabasebenzi, limisela ulawulo kubalo-mali kunye nokunikwa kwengxelo, likhawulezisa ukutshintshiselana ngolwazi, kwaye, ngalo ndlela, lonyusa ukusebenza ngokukuko kunye ukuchaneka kophicotho-zincwadi, umgangatho wokunika ingxelo kunye neenkqubo zenkampani ekhawulezayo, kunciphisa iindleko zeziko lokuthenga ngetyala ngokunciphisa iindleko zabasebenzi kunye nokwandisa imveliso, nto leyo eya kuthi ikhokelele ekuphuculeni inzuzo. Sebenzisa ukuzenzekelayo kobalo-mali kunye nokunika ingxelo, iziko elisebenzisa ikhredithi lakha zonke iinkqubo zokugcina iirekhodi zemisebenzi yalo kunye nenkqubo yolwazi kwiindidi ezahlukeneyo zokunika ingxelo, kubandakanya nokubalwa kwamacandelo kunye nengxelo yeenkcukacha-manani zomlawuli, ngelixa ukuzenzekelayo kusenza onke amaxwebhu alo naluphi na uhlobo yokunika ingxelo.
Ke ngoko, ukuthatha inxaxheba kwabasebenzi beziko lokuthenga ngetyala kuncitshisiwe kwimisebenzi ezenzekelayo, kubandakanya nokwenza ingxelo kunye nokwenza ingxelo, kuba inkqubo yokuzenzekelayo yenza imisebenzi emininzi kwaye, ke ngoko, isebenza endaweni yabasebenzi, uxanduva lwabo ngoku kubandakanya ukongeza ukufundwa kwabo Iifom ze-elektroniki ezichazwe apha ngasentla, ezizezabo bonke abasebenzi kwaye zibonelela ngoxanduva lomntu kumgangatho wolwazi olufakwe kubo kunye nemali ezenzekelayo yomvuzo wenyanga, kuthathelwa ingqalelo ulwazi olufakwe kubo.
Ukuzenzekelayo kweziko lokuthenga ngetyala kulawula imisebenzi yabasebenzi, kuthathelwa ingqalelo ixesha kunye nobungakanani bomsebenzi oqhotyoshelwe kwintsebenzo nganye eyenziweyo, ukwenza umsebenzi wabo kube ngokwakho, ukubonelela ngeengodo ezizodwa kunye nendawo yomsebenzi ngamnye-indawo yoxanduva ngaphakathi kubuchule kunye nemisebenzi eyabelweyo. Kwangelo xesha, ukuzenzekelayo kokunikwa kwengxelo kunye nokunikwa kwengxelo kweziko lokuthenga ngetyala kubonelela ngeefom zobumbano zomatshini njengejenali zomsebenzi ezizodwa ukukhawulezisa iinkqubo zokufakwa kwedatha ezenziwa ngabasebenzisi mihla le, ngokwenyusa isantya seenkqubo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Ukudityaniswa kweefom ezinikezelwa yi-automation kukhokelela ekumanyanisweni kwemisebenzi, ukuzisa ukwenziwa kwabo kwi-automatism, efunekayo yokwandisa imisebenzi. Kwangelo xesha, ukufunyanwa okuzenzekelayo kweziko lokuthenga ngetyala kubhalisa ubungakanani bomsebenzi owenziwe ngabasebenzisi ngexesha, ngokungqinelana nokubekwa emgangathweni kokusebenza, kwaye kuvavanye ukusebenza komntu ngamnye emva kwexesha kulungiselelwa ingxelo yangaphakathi nohlalutyo lwazo zonke iintlobo Umsebenzi kunye nabasebenzi ababandakanyekayo kuzo.
Ukuzenzekelayo kweziko lokuthenga ngetyala kuyalivumela ukuba libe nohlalutyo rhoqo lwemisebenzi yalo, kubandakanya novavanyo lwenqanaba lezicelo zemboleko ezenza inzuzo yalo, ke uhlalutyo lwabo lwenza ukuba kube lula ukulawula isimilo sabathengi, ukuthobela kwabo iimeko zetyala, ixesha elifanelekileyo lokuhlawula, kunye nemali yamatyala akhoyo. Kuya kufuneka yongezwe ukuba yi-USU Software kuphela ebonelela ngohlalutyo oluzenzekelayo kweli candelo lamaxabiso, ngelixa izibonelelo ezifanayo ezivela kwabanye abaphuhlisi zinokunikezela ngexabiso eliphezulu lenkqubo. Iziko lokuthenga ngetyala alifumani kuphela iingxelo nohlalutyo lwazo zonke iintlobo zomsebenzi kodwa kunye neenkcukacha-manani zezalathi ezitshintshayo zotshintsho kumaxesha adlulileyo, ezivumela ukucwangciswa okusebenzayo kwamathuba exesha elizayo, kuthathelwa ingqalelo idatha eqokelelweyo kunye nokuqikelela iziphumo, ukuzenza ngokungaphezulu umkhwa ochongiweyo.
Le nkqubo ifakelwe kwiikhompyuter zeziko letyala ziingcali zethu, ngaphandle kokubandakanya abasebenzi bayo kufakelo, kodwa inikezela ngenkcazo emfutshane yazo zonke izixhobo zesoftware, evumela abasebenzi ukuba baziqhelanise ngokukhawuleza nokusebenza kophuhliso olunempumelelo. Nangona iimveliso zethu zahlukile kubo bonke abanye ngokuhamba kwazo ngokulula kunye nokujongana ngokulula, oku kukuvumela ukuba ubandakanye abasebenzi emsebenzini ngaphandle kwazo naziphi na izakhono zomsebenzisi, ukubonelela ngenkqubo ezenzekelayo ngolwazi olwahlukeneyo. Ulwazi olwahlukileyo olunjalo lunceda ukuqamba inkcazo eneenkcukacha kunye nobunzulu bemeko yangoku yeenkqubo kunye nemisebenzi eyenziwayo ngexesha elinikiweyo kwiziko lezemali.
Ukwenza umsebenzisi asebenze ngokobuqu, ukhetho olungaphezulu kwe-50 yoyilo olunokubonelelwa olunikezelwa ngesondo elifanelekileyo lokuhambisa kwiscreen esikhulu. Abasebenzisi bafumana ukufikelela okwahlukileyo kwidatha yenkonzo, ethintelwe ngumda wemisebenzi yabo kunye namandla, ngokwabela ukungena kwabo kunye neepassword. Ukungena kubuntu kubonelela ngokwenza iifom zobuqu ze-elektroniki, ekulula ukuzilawula kumgangatho, ixesha lokwenziwa, kunye nokuthembeka kwedatha. Ulawulo luxanduva lolawulo, olunokufikelela simahla kuwo onke amaxwebhu, lusebenzisa umsebenzi wophicotho-zincwadi ukukhawulezisa inkqubo yokujonga iinkuni.
Ukusuka kwindawo yogcino lwedatha elenziwe ngenkqubo ezenzekelayo, isiseko sabathengi, igama lokuchazwa, isiseko semali mboleko, isiseko somsebenzisi, kunye nezinye ziveliswa ukuphendula kunye nokwenza ingxelo ngeendlela ezahlukeneyo zemisebenzi. Eyona nto iphambili kwi-accounting yemali mboleko sisiseko semali mboleko, equlathe uluhlu olupheleleyo lwazo kodwa kunye neenkcukacha ezithe vetshe kwisicelo ngasinye ngokwemigaqo, izixa kunye neemeko. Kwimali mboleko nganye, ungabonisa irejista eneenkcukacha zemisebenzi eyenziweyo kwiziko lokuthenga ngetyala ukusukela oko yakhutshwa, kubandakanya imihla, igama lemisebenzi eyenziweyo, kunye neziphumo ezifunyenweyo. Umsebenzi ngamnye owenziwe kwindawo yogcino lwedatha yemali mboleko wabelwa imeko eyahlukileyo kunye nombala kuyo kulawulo olubonakalayo kwimeko yangoku yemali mboleko ukuze uyivavanye ngokukhawuleza.
Inkqubo ezenzekelayo yamaziko okuthenga ngetyala isebenzisa ngokubanzi ukubonwa kombala kwezalathi, okugcina ixesha labasebenzisi kuvavanyo lweenkqubo ezikhoyo kunye nokufezekisa iziphumo. Isiseko semali mboleko sinokuhlelwa ngokulula ngobume bokuqaqambisa eyona ndawo yomsebenzi, enceda ukwahlula imisebenzi yenkampani kwaye, ke ngoko, ukukhawulezisa ukuphunyezwa kwayo. Akukho nto ibaluleke kangako kunesiseko semali mboleko sisiseko sabathengi, apho kungagcinwanga kuphela idatha yobuqu kunye nonxibelelwano lwababolekisi kodwa imbali epheleleyo yokunxibelelana nomntu ngamnye iqokelelwa. Apha, irejista efanayo yokunxibelelana nomthengi ngamnye yenziwa, apho zonke izinto ezenziwayo ziboniswa ngemihla, kubandakanya iifowuni, iileta, kunye neziphumo zonxibelelwano.
Abathengi bahlulahlulwe ngokwamacandelo ngokokuhlelwa okukhethwe liziko lekhredithi, oku kukuvumela ukuba uququzelele unxibelelwano namaqela ekujoliswe kuwo, nto leyo eyonyusa kakhulu umlinganiso wonxibelelwano. Inkqubo ngokuzimeleyo yenza lonke ubalo olunxulumene nokubalwa kwemali kunye nokunikwa kwengxelo, kubandakanya neentlawulo ezijonga ishedyuli yokuhlawula, inzala, iikhomishini, kunye nokwenza ubalo kwakhona lwentlawulo xa inqanaba lotshintshiselwano luguquka. Ibala imivuzo yamacwecwe kubasebenzisi ngokomthamo wemisebenzi ebhalisiweyo kwiigodo zabo zomsebenzi, yonyusa umsebenzi wabasebenzi.